AMISOM oo dacwad looga furay maxkamad ku taal dalka Maraykanka – Radio Damal
AMISOM oo dacwad looga furay maxkamad ku taal dalka Maraykanka
Ciidamada AMISOM ee ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa dacwad ku saabsan soo ridistii diyaarad ay lahayd shirkada Fly Africa oo 4tii May ee sanadkan lagu soo ridey degmada Bardaale ee gobolka Bay.
Shirkadda Fly Africa ayaa qareen u qabatay soo ridistii diyaaradan oo ay ku dhinteen lix ruux isla markaana ay hanti badan ku burburtay.
Laanta Afka Soomaaliga ee VOA oo barnaamij ka diyaarisay dacwadan ayaa sheegtay iyadoo oo xiganayso qareenka dacwad loo qabtay in uu rajeynayo in magdhow ay helaan ehelada dadkii ku dhintey iyo hantidii ku burburtay diyaaradan.
“Waxaan wakiil ka nahay shirkada fly afica iyo qoysaska dadkoodu ay ku dhinteen diyaaradan waxaana aan rajeynaynaa in ciidamada amisomn lagula xisaabtamo falkaas lix ruux ku dhimatay hanti badana ku burburtay,”ayuu yiri qareenka u doodaya shirkadda Fly Africa.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowlada federalka Maxamed Salaad oomar ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameeyeen warbixin hordhac ah ay ka diyaariyeen burburka diyaarada.
“Waxaan diyaarinay warbixin hordhac oo ku saabsan burburka diyaaradan waxaana aan rajeyneynaa inaan soo bandhigno dhowaan warbixinta.”ayuu yiri sii hayaha wasiirka duulista hawada Oomaar.
Ciidamada soo ridey diyaaradan oo sidey agab caafimaad ayaa ka mid ah ciidamada Ethiopia ee ku sugan dalka Soomaaliya waxana ay sheegeen inay ka baqeen diyaarada maadaama aan lagu soo wargelin imaanshaheeda.